China OEM PP Cotton shawa musoro katuriji firita Core Mugadziri uye mutengesi | Xinpaez
Nyowani Tech yekugezera firita - Yechipiri Chizvarwa chigadzirwa, Yakaomarara, Inoshanda zvakanyanya kukosheswa, Kukwana Kubvumidzwa
Shower filtration - Ye imputies, Rust, Guruva, Nemotode, ETC.
Hupenyu Hurefu - 3-6 Mwedzi
OEM ODM - Yakakwira Kugadzira Kugona, zvigadzirwa zvakagadzirwa.
Mamiriro: Shower kusefa
Minimum yekuraira huwandu: 1000
Kunyangwe kubvuma kugadzirisa. OEM, ODM inogamuchirwa
Saizi: 70/106/124/118 MM
PP donje Shower Sefa Core
Chinyorwa chemhando yepamusoro: polyester fiber (PP zvinhu)
Yekutsiva nguva: 3 kusvika kumwedzi mitanhatu, zvinoenderana nemhando yemvura, kazhinji 10000L.
Rinoshanda: Sefa iyo colloidal tsvina, matope, ngura, zvipembenene mazai, makemikari zvinosvibisa, nezvimwewo
Mwero wekutsvaira: 5 Micron
Iyo PP donje firita chinhu chakagadzirwa nepolypropylene resin sechinhu chakasvibirira kugadzira tambo, izvo zvakasungwa neiyo fiber pachayo. Maumbirwo echinhu chesefa chiumbwa chine gobvu rekunze rekutetepa, tambo dzemukati dzakatetepa, dzakasununguka rukoko rwekunze, uye rakasimba denderedzwa remukati. Kuchenesa kubva kunze kuenda mukati, padyo nepakati pemukati mechinhu chesefa, iyo diki saizi yepore, inokwidziridza iyo chaiyo firita.
Iyi yakasarudzika gradient yakadzama filtration yakaumba mativi-matatu emadziro kusefa mhedzisiro, iyo inogona kuve yakawanda-yakatetepa uye yakadzika chimiro, iine rakakura tsvina inobata chinzvimbo; PP yakanyungudika yakapepereswa firita chinhu chakasimba, apo iyo yekupinda inlet uye nzira yekubuda musiyano iri 0.4Mpa, iyo filtration kuyerera chiyero hombe, uye musiyano wekumanikidza idiki, Iyo firita musimboti haina kuremara; Inobatanidza pamusoro, yakadzika, yakaoma uye yakanaka kusefa; Iine hunhu hwekuyerera kukuru, kurwisa ngura, kumanikidza kwakanyanya. Inoshandiswa kuvharira zvidimbu zvakakura seyura, jecha nemazai ezvipembenene mumvura.
Kutaura nezve chinotsiviwa, Nekuti iyo PP donje firita chinhu ndeye chekutanga-chikamu firita chinhu kana shawa, zvinopfuura makumi masere kubva muzana ematsvina achasvinwa padanho rino, uye kuwanda kwetsvina kwadzvurwa, iyo nyore firita chinhu kuvharidzirwa. Naizvozvo, hupenyu hwePP donje firita chinhu ipfupi kwazvo. Iyo firita element ingangoda kutsiviwa kweinopfuura mwedzi miviri munzvimbo dzine hunyoro hwemvura, uye nzvimbo yakareba kwazvo ine mhando yemvura iri nani haingapfuure mwedzi mitanhatu. Saka kana iwe ukatenga shawa musoro ine PP donje firita chinhu, kuitira kuti udzivise kusvibiswa kwechipiri, zvinokurudzirwa kuti utsive firita musimboti wega wega 3-6 mwedzi kana zvakadaro.
Maitiro ekutonga mhando yePP donje firita chinhu
1. Ndokumbira utarise huremu. Tinogona kuyera huremu nemaoko edu. Iyo inorema kurema, iyo inowedzera iyo fiber density yeiyo firita chinhu. Hunhu hwakanaka zvakare.
2. Ndokumbira utarise izvo zvinyorwa. Paunenge uchisarudza firita, iwe unofanirwa kuve netariro nezve izvo zvinhu zvesefa chinhu. Ruvara rweyakajairwa firita musimboti yunifomu uye pamusoro yakati sandara. Iyo yakaderera firita yepamusoro haina yunifomu muvara uye yakashata mukugadzirwa.
3. Kugadzikana. Kazhinji, iyo yakakwira iyo fiber density yeiyo firita. Izvo zvirinani iko kumanikidza kuita, zvirinani kunaka kweiyo PP donje firita moyo. Tinogona kutonga neruoko kunzwa, iyo yakasimba ruoko rwekunzwa, zvirinani iko kumanikidza kuita.
Kazhinji tinopa hukuru huna, OEM uye ODM masevhisi aripo. Hazvina mhosva kuti saizii yaunoda,
tinogona kuzviita. Parizvino isu tine gumi ekugadzira mitsara inoshanda paPP Core ine pamwedzi kuburitsa mamirioni maviri.
Pashure: OEM Aroma Vitamin C yekugeza firita katuriji
Zvadaro: Nyowani nyowani High Pressure Yakakwenenzverwa Ruoko Shower
yakanyanya kugeza musoro
Sefa yekugezera musoro
umbozha ruoko shawa musoro
yemhando yepamusoro shawa musoro
New Technology zvedongo chicherwa Handheld yokugezera ...